Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina mankany London Heathrow avy any Calgary amin'ny WestJet izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Sidina mankany London Heathrow avy any Calgary amin'ny WestJet izao.
Lalana WestJet vaovao hanafaingana ny fanarenana ara-toekarena an'i Alberta sy hitarika ny fampiasam-bola amin'ny fifandraisana amin'ny foibe manerantany ao amin'ny Heathrow London.
Ny lalana vaovao tsy an-kiato an'i WestJet avy any YYC mankany London Heathrow, seranam-piaramanidina be mpampiasa indrindra any Eoropa, dia raisin'ireo mitady ny hiditra amin'ny foibe ara-bola sy fandraharahana voalohany eran'izao tontolo izao ary ireo maniry ny hifandray mivantana hijery ny kolontsaina sy ny mari-pamantarana any Londona.
Heathrow dia toeram-pidirana manan-danja ho an'ireo mpanao dia lavitra sy fialam-boly ary hitondra tombony lehibe ho an'ny mpampiasa vola sy mpizaha tany.
Ny fidirana amin'ny rivotra dia manan-danja amin'ny fanarenana ara-toekarena an'i Alberta sy ny fitomboan'ny indostrian'ny fizahantany.
WestJet androany dia nanambara fa hanampy serivisy tsy an-kiato ho an'ny London's Seranam-piaramanidina Heathrow (LHR) manomboka amin'ny fiandohan'ny lohataona 2022. Raha mbola manohy mampitombo ny fifandraisana manerantany avy any Western Canada ny WestJet, ny fanampiana ny serivisy tsy an-kiato eo anelanelan'i Calgary sy London-Heathrow dia mampiseho fahatokisana amin'ny famerenana ny fitsangatsanganana ara-barotra sy fialamboly eo amin'ireo toerana roa ireo.
"Amin'ny maha zotram-piaramanidina manana sidina betsaka indrindra avy any Alberta, ity dia dingana lehibe amin'ny fanarenana rehefa mamorona fifandraisana vaovao eo amin'i Kanada sy ny iray amin'ireo foibe eran-tany tadiavina indrindra," hoy i John Weatherill, WestJet Lehiben'ny varotra. "Manohy manamafy orina ny tambajotra izahay, manolotra safidy bebe kokoa ho an'ny mpanao dia lavitra sy fialam-boly ary ireo fampiasam-bola ireo dia hanafaingana ny fanarenana ny indostria raha miantoka ny Western Canada hiverina amin'ny areti-mifindra mifandray kokoa noho ny teo aloha."
Satria tsy mitsaha-mitombo ny fahatokisana amin'ny fitsangatsanganana ara-barotra sy fialamboly, WestJetNy zotra vaovao farany dia hiasa amin'ity lohataona ity amin'ny 787 Dreamliner an'ny zotram-piaramanidina. Ny serivisy 787 an'ny WestJet dia manasongadina ny Business Cabin an'ny zotram-piaramanidina ao anatin'izany ny pods lie-flat, ny fisakafoanana amin'ny fangatahana ary ny safidy Premium sy Economy Cabin.
"Manolo-tena amin'ny fanitarana ny ivon-toeranay manerantany any Calgary izahay ary manohana ny fanarenana ny sehatra maro izay miantehitra amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany," hoy hatrany Weatherill. "Amin'ny maha zotram-piaramanidina manana zotra Eoropeana tsy miato indrindra avy amin'ny YYC, dia manantena ny vahiny hahazo tombony amin'ny safidy bebe kokoa sy fampitomboana ny fifandraisana amin'ny dia eo anelanelan'i Kanada sy UK."
Miampy ny Heathrow amin'ny tambajotran'i WestJet amin'ity lohataona ity, WestJet dia hampifandray an'i Calgary amin'ny toerana 77 tsy an-kiato mandritra ny taona. WestJet dia hanohy hanolotra sidina tsy an-kiato eo anelanelan'i Calgary, Vancouver, Toronto ary Halifax mankany London, Gatwick.
Ny antsipirian'ny tambajotra fanampiny momba ny dia eo anelanelan'i Calgary sy London-Heathrow ao anatin'izany ny matetika, ny fotoana ary ny vidin'ny fampidirana dia ho azo, ary amidy, amin'ny herinandro ho avy.